Inqubomgomo entsha Customs! Manifest Rule Izinguquko ku Import & Export! - China Longkou Fushi Ukupakisha
China Customs ukhiphe Order No.56 ukulungisa kwangaphakathi umthetho manifest okuyinto ukuthatha nomphumela ku 1th Juni, 2018.
Ezinye izinguquko zenziwa kwi aphumayo pre-manifest, isibonelo:
1.The ukuqedela nolwazi wezimpahla olunembile kumele zithunyelwe China Customs ngekhompyutha 24 amahora ngaphambi ukulayisha ebhodini umkhumbi ngomkhumbi ukuze / nge / aphume izimbobo Chinese.
ID intela 2.Shipper sika, inombolo shipper, igama inkampani consignee sika njengoba idatha main e pre-manifest kuyalungiswa futhi kungabikho masimu saziso.
3.All impahla ngaphansi izikweletu of lading kumele limenyezelwe manifest ngokuphelele futhi ngokunembile. China Customs uzoqalisa ukusebenza Negative ohlwini Ukuphathwa phezu impahla wamemezela. Noma yimuphi e-ngokuvumelana ukuba Customs isiqondiso kuzonqatshelwa
Izinkampani eziningi lokuthumela uke wakhipha izimemezelo ahlobene kanye. Futhi amakhasimende kudingeka ukuthi unikeze iziyalezo ezinembile ephelele lokuthumela phambi imibhalo asikiwe isikhathi njengoba ishicilelwe kumawebhusayithi kwakunikeza izinkampani zemikhumbi.
Iziphi izinguquko ngeke lokhu kulungiswa ukuletha?
Njengoba imoto ingeniswe ku mpumalanga China noma zazidlula ngokusebenzisa mpumalanga China, ephelele futhi kunembile idatha obusobala wezimpahla kumele ithunyelwe China Customs nge-electronic data amahora angu-24 ngaphambi kokuba kuthunyelwe, Juni 1st, 2018.
Yini okushiwo ephelele futhi kunembile manifest idatha?
Amagama zonke cargos ngaphansi i-invoyisi liyakushunyayelwa ngokucacile futhi ngokuphelele kuvezwe manifest, futhi izinto datha ukulungiswa-manifest okusha zifaka:
1.USCC we consignor
2.Phone inani consignor
3.Enterprise Ikhodi shipper
4.Name we consignee (noma ubhale phansi "Ukuze ORDER" esimweni ethize)
5.USCC we consignee (Uma consignee kuyinto "Ukuze oda", bese USCC kungadingeki)
inombolo 6.Phone ka consignee (Uma consignee kuyinto "Ukuze oda", bese ulwazi lokuxhumana kungadingeki)
7.Name we consignor (noma ubhale phansi "UKUZE ORDER" esimweni ethize)
8.Enterprise Ikhodi ye consignee
9.USCC we azise inhlangano kuyadingeka uma consignee kuyinto "oda".
inombolo 10.Phone we azise inhlangano kuyadingeka uma consignee kuyinto "oda"
Ingabe ukwephulwa Phosela manifest ukujeziswa?
Isijeziso mthetho sezisunguliwe yi Customs ngokuqondene ukwephula ku-manifest wokufaka. Igama lesimiso oku "Odinensi Ukuqala kokusetshenziswa Isijeziso Administrative we Customs we Yabantu Republic of China", okuyinto saphuma waqala ukusebenza ngo-2004.
Ingabe inqubo eziholela ukudalulwa kolwazi amaklayenti '?
Inqubo ye-manifest shintsho omusha aliholeli ukudalulwa yebhizinisi amaklayenti 'ezibucayi.
Ezizwelayo izinto idatha ukungezwa manifest (ngaphandle igama consignee) ngeke aboniswe kwi i-invoyisi esikhishwe esiphathiswa. Ngemva manifest ithunyelwa amasiko, izisebenzi amasiko kumele bavikele izimfihlo zokuhweba kanye izimfihlo olufanele umsebenzi amasiko ngokuhambisana nomthetho.
I-June 1st kuyinto ekhoneni, ukuze uqiniseke ukuthi izimpahla zidlule amasiko ngokushelela, sicela unake nokubhaliswa manifest entsha, futhi ukugcina izimpahla ezithile kusukela abotjhiwe!